बार्सिलोनाबाट दाली दिवस यात्रा | सडकको लागि एक युगल
मार्च 21, 2017 / 12 टिप्पणिहरु
नयाँ शहरहरूमा गएपछि, एक दिन यात्रा लिनु तपाईंको अनुभवलाई अधिकतम बनाउन एक महान तरिका हो, र बार्सिलोनाबाट दिन यात्रा लिने मौका अनन्त छन्। बार्सिलोनाको हालैको यात्राको दौडान हामीले स्पेनको जादुई उत्तरपूर्वी तटको साथ साल्वाडोर डाली थियेटर र गिरोनाको संग्रहालयको साथमा एक सानो समूहको दिन यात्रा गर्ने मौका पाएका थियौ। साथै उनको पोर्टफ्लुटलमा सुन्दर र व्यक्तिगत रूपमा डिजाइन गरिएको घर। कला को एक छात्र को रूप मा, र दाली को एक आजीवन प्रशंसक को रूप मा, यो यस यात्रा को लागि स्वेच्छाजनक थियो, र यो निराश छैन!
शहर बार्सिलोनाको टूर अफिसमा सुरू गर्दै, हाम्रो होटलबाट केही ब्लकहरू हिँड्दा हामी अन्य आठ वा यस्तै साथी साथीहरूसँग भेट्यौं। हाम्रो समूहमा सबैजना अंग्रेजी बोल्दै थिए, त्यसैले गाइडले हाम्रो देशको भाषामा परिचय गर्यो र भ्रमणको विवरण र टाइमलाइनलाई वर्णन गर्यो। त्यो अत्यन्त अनुकूल थियो र हामी दिनहुँ प्रस्थान गर्नु अघि कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिए! हामी बार्सिलोना देखि कोस्टा ब्रावा हाम्रो दिन यात्रा को हाम्रो बाटो मा थिए!
प्रत्येक कुनामा वरपर अर्को कृति।
ड्राइभले तपाईंलाई सुन्दर तटीय क्षेत्रहरू वरिपरि लिन्छ र अनुभवी टूर गाइड बाटोमा उत्राउँछ, तपाइँ क्षेत्रहरु लाई इतिहासको साथ दिइरहनु भएको छ साथै तपाइँ डाली आफैंको बारेमा रोचक र अनौठो तथ्यहरू बताउनुहुन्छ। हामी कलाकारको साथसाथै उनको संग्रहालय र घरको बारेमा धेरै प्रभावित भएका थिए।
दली थिएटर र संग्रहालय
लगभग दुई घण्टाको सवारी पछि, हामी फिगोयर्स, गिरोनाको अचम्मको दाली थियेटर र संग्रहालयमा आइपुग्यौं। 1974 मा खोलिएको छ, यो स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कामको सबैभन्दा ठूलो संग्रह घर। परेपमा ठूला मूर्तिहरूको साथमा राखिएको छ, र गुलाबी-हिरो पर्खालहरू रोटीको ढोकामा बाँधिएको छ, यो अतियथार्थवादलाई अनुचित बनाइएको छ। बाहिरी भागको विशिष्टता प्रशंसा गर्न एक मिनेट लिनुहोस्; यो सिर्फ दलीको कल्पनाबाट छिटो अद्भुत कलाकृतिको सुरुवात हो।
संग्रहालयमा प्रवेश गर्दा, हाम्रो पहिलो अनुभव निकै मेहनत थियो। एक गैर-पठाइएको यात्रीसँग पूर्ण 1941 क्याडिलैक, एक बारिशमार्गमा भित्रिएको छ। एक टुक्राको सिक्का-संचालित आकर्षण, यस टुक्राको लागि दालीको दर्शनमा एउटा टिप्पणी थियो कि उनीहरूले बारम्बार हुँदा कसरी एक टैक्सी पाउन सक्दथे! त्यहाँबाट तपाईं संग्रहालय घुम्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, र प्रवेश गर्दा, तपाईं आफैंको सबैभन्दा प्रसिद्ध कामहरु को एक उपस्थितिमा भेट्टाउनुहुनेछ, "गेल भूमध्य सागर समेटेर"। यद्यपि, पहिलो नजरमा, तपाईले प्राय: देख्नुहुनेछ कि उनको धेरै प्रिय पत्नी, गला को सट्टा अब्राहम लिंकनको बिस्तार हो।
दलीको उनको अतियथार्थवादी धारणा उनको संग्रहालय - गला।
द्रुत टिप्पणी: तपाईंले देख्नुहुनेछ दली पत्नी पत्नी गाला आफ्नो कामकालमा प्रायः प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यो उनको संग्रहालय थियो, र घर मा रह्यो कि त्यो कडाकुज मा किनारा मा बनाइयो, जहां उनि 1982 मा मृत्यु भयो।
तिनको प्रतिभा व्यक्त गर्न दालीले कुनै पनि माध्यम, यहाँका क्यालिलकहरू प्रयोग गरे।
संग्रहालयमा प्रत्येक गलियारे र हलवेको माध्यमबाट म्यानमार निश्चित गर्नुहोस्, हरेक पर्खालले दालीको जीनियस र सम्भवतया सचेतकताहरुलाई बुझाउँछ। अर्को प्रसिद्ध टुक्रा माई वेस्ट रूम हो, जहाँ एक सोफे र अन्य वस्तुहरु उनको अनुहार मा बदलिन्छ एक पल्ट जब तपाईं कोठा को पछाडी मा सानो सीढ़ी यसको इरादा देखि परिप्रेक्ष्य देखि देखने को लागी!
यो अनूठे संग्रहालय न केवल आफ्नो सबैभन्दा ठूलो संग्रह हो, तर यसको सबैभन्दा धेरै कृत्रिम कामहरू, ग्रीक आत्म-चित्र सहित ग्रील्ड बेकन (1941), अमेरिकाका कविता-ब्रह्माण्ड एथलीटहरू (1943), गलारिना (1944- 45), टोकरी रोटी (एक्सएनएमएक्सएक्स), लेडा एटोमा (एक्सएनएमएक्सएक्स), क्षेत्रका गैलाटे (एक्सएनएमएक्सएक्स) र क्रिस्ट डे ला ट्राम्टन (एक्सएनएमएक्सएक्स)। मुख्य गैलरीको अतिरिक्त, संरचनाले डेलीको अनौपचारिक अप्टिकल र एमोरफिक कलाको कोठामा समर्पित गर्दछ, साथै यसको अन्तिम पूर्ण चित्रकारी, द निलो टेल, 1945 मा सिर्जना गरिएको छ।
दालीको प्रतिमामा क्याडाकुज को केन्द्र मा।
हामी घुमाउदा हल्लामा हिंड्यौं त्यहाँ हरेक मोड इतिहास थियो। प्रारम्भिक स्केचबाट मूर्तिकलाबाट, तिनको प्रतिभाको बीचमा अनावश्यक महसुस गर्न गाह्रो थियो, हरेक दृश्यबिन्दुले हाम्रो बार्सिलोनाबाट हाम्रो दिन यात्राबाट घर फर्कने एक मात्र प्रभावकारी प्रभाव पारेको थियो।
द्रुत नोट: संग्रहालय को अलग-अलग क्षेत्रहरु मार्फत सबै कला को भित्ता मा राखन को लागी को रूप मा देखने को लागि सुनिश्चित गर्नुहोस!
तपाईं कुन कुरा देख्नुहुन्छ - लिंकन वा गला?
दालीका चित्रहरु को अतिरिक्त, उनको काम को सबै भन्दा पहचाना, हामी उनको आर्टिस्ट द्वारा तैयार गहने को आसन्न गैलरी को दौरा गरे। चमक र सोच्न उत्प्रेरक, यो सानो ग्यालेरीले तपाईंलाई यी अमूल्य टुक्राहरुलाई गिलास को नजिकै नजिक राख्ने अनुमति दिन्छ। साँच्चै मिल्दैन!
हामी आफ्नो समय सबै लाग्न लागे पछि संग्रहालयले प्रस्ताव गरेको छ, हामी बाहिर काटेर सानो क्याफेमा सडकमा पछाडि काट्न हौं जहाँ हामीले एक जोडा स्यान्डविचबाट स्वागत स्वागत गरेका छौ। बाहिर निस्कने पछि, यो समय चल्ने ... कोडाजहरूमा!
UP को हेर्न सधैं सम्झनुहोस्!
डाली हाउस मा पोर्ट लिलिट, क्याडाज
संग्रहालयबाट एक छोटो ड्राइभ अज्ञात तटीय शहरको क्याडिज हो, जहाँ तपाइँ दालीको चतुर प्रतिमा देख्न सक्नुहुन्छ (एक उत्कृष्ट फोटो सेप्टर!) र स्वादिष्ट भोजन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जब तपाईं सही किनाराको किनारमा जानुहुन्छ। भूमध्य सागरमा कोस्टा ब्रावा मा स्थित यो शहर एक पहाडी र पहाडी पृष्ठभूमिको विरुद्धमा भित्तामा पर्खाल पसल र रेस्टुरेन्टको क्लासिक किनारमा शान्त छ।
पानीमा घुमाउने सडकहरू हिँड्ने, दृश्यले चट्टानको किनाराबाट लुटेको छ, र खुसी मौसमको बावजूद, हामीले हाम्रो कोट बटन बसाल्दै र खुसीसाथ हाम्रो लंचको आनन्द लिन बाहिर बसेको थियो। केहि चश्मे को शराब, केहि सरदारों टोस्ट मा, र एक दोस्ती स्थानीय बिल्ली को बैठक मा, हामी misty सड़कों को फिर्ता र हाम्रो पोर्ट पोर्टलिगेट मा डाली को घर को लागि छोटो सवारी को लागि पुनः राजी गरे।
क्याडाकुजमा नयाँ मित्र भेट्टाउनुहोस्।
साल्वाडोर डालीको घर र संग्रहालय पोर्ट लिलिटमा मालिकले आफैलाई डिजाइन गरीएको थियो, पासग्वे र कोठाको एक भूलभुलैयामा हामी अनियमित थियौं। रिमोट मछुआरेको गाँउमा पानी बनाइयो, यो XVUMX सम्म साल्वाडोर र गलाको मुख्य निवासको रूपमा रहेको थियो। 1982, साल्भाडोर र गटामा खरिद गरियो आफ्नो शुरुवात स्थानमा निर्माण गर्न थाले जब सम्म यो दुई कथाहरु र छान्न को लागी छानिएका ठाउँहरू जहाँ तिनीहरूले आफ्नो वास्तविक स्वाद प्रदर्शन गरे। उहाँ विशेष गरी यस सुन्दर स्थानको लाइट र ल्यान्डस्केपको साथमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो साथै साथै यो व्यस्त सहरको सडकबाट दूरी छ।
घर पुग्छ सानो सडकमा पुग्दा, हामी पोर्ट को शान्त र सारन दृश्यमा बाटोको बायाँ तिर आइपुग्थ्यो। घरको घरको छेउमा काँधमा रगत बगिरहेको थियो। अनुहारमा अनुहारमा रगत बग्यो।
उनको घरको प्रवेशले तपाईंलाई स्यामसंगको अनुभवको सुरुवातमा ल्याउँछ। एक ठूलो भालूको रूपमा एक बत्तीको क्षेत्रमा लम्बाइ राख्छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक जीवन्त ठाउँ, साथै अन्य क्षेत्रहरू जनतालाई घुमाईन्छ, प्रायः घरको अन्वेषणको लागी खुल्ला छ जहाँ तपाईं धेरै फोटोहरू तपाई जस्तै मनपर्छ! हामी सबै घर घुमाउन स्वतन्त्र थिए, रियरमा प्रभावशाली पूल क्षेत्र सहित, जहाँ प्रसिद्ध बैठे क्षेत्रले पियरिलो टायर पचासहरूको घिमिरे माई वेस्ट होंठ सोफेमा प्रदर्शन गर्दछ।
डालीको रोचक दृष्टिकोण सबै ठाउँमा थियो - भित्री पूल!
डेली घर भित्र सबै भन्दा आकर्षक कोठाहरु मध्ये राउन्ड रूम थियो, एक अन्य जीवित ठाउँ को एक डोड सर्कल को रूप मा डिजाइन गरिएको थियो, र आरामदायक र रंगीन कोचहरु र क्षेत्रहरु को आसपास को तकिए सम्म पुगन को लागी, हामी यसको सर्वश्रेष्ठ फीचर को लागि केन्द्र मा खडा । यस सर्कुलर स्पेसको बीचमा, ठूलो आवाज बोल्न सुरु ... तपाईं आफ्नो आवाज भित्ताहरू विरुद्ध गूंज सुन्नुहुनेछ! यो दोहोरी र थोडा मन झुकाउने अनुभव हो। जब तपाईं परिधिमा जान्नुहुन्छ, त्यो गूंज प्रभाव गायब हुन्छ। धेरै आश्चर्यजनक (र मजेदार)!
दालीको गूंज कोठा - घरको केन्द्रमा सुन्दर सुन्दर क्षेत्र।
मुख्य बेडरूम मा दुई अलग र रंगीन बेडहरु, गुलाबी लिननहरु र साना ओवरहेड क्यानोइजहरुमा सजाए गए, यसको खिडकियां शांत बंदरगाह को पानी को सामना गर्दछ। हामी शान्त दृश्य हेर्न गुज्र्यो जब हामी हरेक बिहानको दृश्य कल्पना गर्न सक्थ्यौं। तपाईं म्यानाररको रूपमा, तपाईं आफैलाई सानो हल्लाहरू र सीढ़ीहरू मार्फत घुमाउन खोज्नु हुनेछ, जसको एउटा कोठामा जहाँ उनको पेंट र अन्य आपूर्तिहरू अलपत्रिएका छन्। यो गहिरो ऐतिहासिक प्रदर्शन नजिकको उनको वास्तविक कला स्टूडियो हो, एक पर्खाल माउन्ट भएको तन्त्रिकासँग पूरा भयो जसले तिनका क्यान्सरहरू हटाइदिने र फलाममा निस्कने अनुमति दिए। गाइडले हामीलाई सूचित गर्यो कि, अझै पनि यो स्पेसमा बसिरहेको छ, उनको अन्तिम अधूरो काम लिफ्टबाट छरिएको छ। दली घरको लगभग सबै विन्डोजको रूपमा, उनको स्टुडियोले सर्वोत्तम लाइट कब्जा गर्न पोर्ट को किनारेको सामना गर्यो।
दलीको उपकरण भण्डारणमा एउटा झिकेर - त्यो दिनको रूपमा बाकिन्छ जुन उहाँ मर्नुभयो।
गाइडको साथ जगेडा गर्न पछि, जसले आवासको इतिहाससँग हाम्रो अनुभव वर्णन गर्न जारी राख्यो, तिनले साल्भाडोर र गाला दुवै मालिकको बारेमा रोचक सुविधाहरू र अनौपचारिक अभिव्यक्तिहरू छलफल गरेर हाम्रो भ्रमण बढाए।
प्रभावकारी र एक्लेक्टिक इन्टरनेटको अतीत अगाडी बढाएर, हामीले पानी क्षेत्रको वरिपरि पैदल यात्रा र अतिरिक्त टुक्रा र स्थान बनाउनु भएको ठाउँको लागि पूल क्षेत्रमा हाम्रो बाटो बनायौं। पूल को पछाडि एक आलु र रंगीन कुशन देखि भरा एक कवर बैक क्षेत्र हो। यो सबै हामी बस्न र दिनको आरामको लागि आराम गर्न सकेनौं!
एक कला उत्साही को रूप मा, मलाई एक दिन को अन्त मा अनुरोध थियो - कि म नजिकै बंदरगाह को किनारा मा बस्न को लागि समय हुनेछ र एक चित्र को स्केच हुनेछ कि Dali को दृष्टिकोण को देखने देखि। म कागज ल्याउन चाहन्छु, तर त्यतिबेला पोर्टलग्याटबाट बार्सिलोनाबाट बस अब इन्टरनेटमा पार्क गरिएको थिएन, र मेरो स्केच प्याडमा पहुँच गर्न सक्षम हुदैन म धेरै बिदा भएन!
मेरो निराशा सुन्नु पछि, हाम्रो जेनियल र क्षतिपूर्ति टूर गाइडले मलाई एक पेपर र एक कलमको शिकार गरेर अचम्म अचम्म लाग्यो ताकि मैले मेरो मिशन पूरा गर्न सक्दिन जहाँ महान कलाकार स्केच भयो। मैले शान्त पानीको माथिको पत्थरसँगै बसेर मैले मेरो दृश्य देखेको छु यात्राको मेरो सबैभन्दा पुरानो सम्झनाहरु मध्ये एक हो।
दालीको दृष्टिकोणबाट दृश्य स्केच गर्दै।
यदि कलाले तपाईंलाई उत्प्रेरित गर्दछ भने, यदि इतिहास तपाईंलाई सावित गर्दछ, स्पेनको यो क्षेत्रमा भ्रमण गर्न र व्यक्तिगत रूपमा दालीलाई अनुभव गर्न समय लिनुहोस्। यद्यपि उनको काम सारा संसारमा देखा पर्यो, वास्तवमा उनले डिजाइन गरेको संग्रहालयमा आफ्नो संग्रह देखेर केहि पनि छैन।
त्यहाँ एक अनिवार्य भावना हो जब हिल्स जहाँ 40 सालों भन्दा धेरै बढी रहन को लागी, स्टूडियो को देखने को लागि जहां उनले आफ्नो समयहीन कला तैयार गरे, र किनारा मा बैठे जहां रोशनी उससे प्रेरित थियो। परिदृश्यलाई हेर्दा साइटबाट हामी बार्सिलोना फर्कियौँ किनभने हामी बार्सिलोना पुग्यौं।
कोस्टा ब्रावा को लागि उपयोगी यात्रा संसाधन
बार्सिलोनालाई फेगेरियो नक्शा - यो काम नक्साको साथ बार्सिलोनाबाट तपाईंको भ्रमण योजना बनाउनुहोस्
Expedia.com - बार्सिलोना र कोस्टा ब्रावा मा बुक किफायती आवास वा बन्डल उडानहरु र होटल।
सिफारिस गरिएको गाइडबुक: लोनली ग्रह ग्रह Catalunya र कोस्टा Brava
सुझाव गरिएको पढाइ: साल्वाडोर डाली होम मा
श्रेणी: कला र संगीत, युरोप, सर्वाधिक लोकप्रिय, समीक्षा, स्पेन, यात्रा योजना टैग: कला, बार्सिलोना, cadaques, दाली, figueres, स्प्यान
←5मजा कुरा किट लाउडरडेलमा गर्न को लागी
समीक्षा: क्लिफ मोर डे-ट्रिप →
12 टिप्पणिहरु "बार्सिलोनाबाट दिन यात्रा: कोस्टा ब्रावा र साल्वाडोर डाली"
वाह यहाँ कला शानदार छ! मलाई थाहा छ कि म कहाँ जान चाहन्छु !! म यो मेरो पतिलाई देखाउन जाँदैछु। म यहाँ कहिल्यै पनि सोच्न सक्दिन तर केवल फाँट बाहिर र कला र संस्कृति अन्वेषण जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ कि यो एक सुन्दर र आराम यात्रा हुनेछ। मलाई यो पढेर मजा आयो।
धन्यवाद ब्रिटानिका! यो एक अविश्वसनीय स्थान र राम्रो थियो, राम्रो समय र पैसाको लायक।
त्यो साँच्चै एक ट्रिस यात्रा थियो। तस्वीरहरू प्यारी छन् .. मैले पहिले संग्रहालयमा भेटें र त्यो मेरो प्रमुख वर्षको एक हो। इच्छा छ कि म त्यहाँ मेरी छुट्टी को खर्च गर्न सक्छ ..
यो एक सुन्दर ठाउँ हो, बिल्कुल सुन्दर र इतिहास संग प्याक!
त्यो स्थान सुन्दर देखिन्छ। यो आश्चर्यकला मा पछाडि जस्तै हुनुपर्छ।
वास्तवमा, यो राख्नु राम्रो तरिका हो, Erika। यो एक असाधारण ठाउँ हो, र तपाईंलाई कसरी अद्वितीय र शानदार दाली थियो केहि वास्तविक अन्तरदृष्टि दिन्छ। भ्रमण गर्न अद्भुत ठाउँ!
डिसेम्बर 4, 2017
वाह, चमत्कारकारी कला। मलाई यो पढ्न मन पर्छ। बाड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईंको महान कामको बारेमा रिग्रेड गर्नुहोस्। जारी राख!
आहा! त्यो अचम्म लाग्छ। तपाईले साँच्चै आनन्द उठाउनुभयो र हावाइलो वातावरण बनाउनुहुन्छ! धेरै मन पर्यो।
निश्चित गरे! धन्यवाद हन्ना!
तपाईंको दिन यात्रा पूर्णतया सास लिइरहेको छ! के कृपया मलाई यात्रा भ्रमण कम्पनी बताउनुहुन्छ र तपाईले कति खर्च गर्नुभयो? अग्रिम धन्यवाद !
नमस्कार एलिसा! हामी वास्तव मा यो वैइटर को माध्यम ले मिलयो। अद्भुत कम्पनी जसले हामीलाई काम गर्न मन पर्छ!